လျှပ်စစ်သုတ-၀.၅-မြန်မာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအခြေအနေအပေါ် A.G.T.I (E.P) တစ်ဦး၏ အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လျှပ်စစ်သုတ-၀.၅-မြန်မာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအခြေအနေအပေါ် A.G.T.I (E.P) တစ်ဦး၏ အမြင်
လျှပ်စစ်သုတ-၀.၅-မြန်မာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအခြေအနေအပေါ် A.G.T.I (E.P) တစ်ဦး၏ အမြင်
Posted by Swal Taw Ywet on May 25, 2012 in Creative Writing, Think Different | 15 comments
Myanmar Electricity Transmission and distribution
တကယ့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဘယ်လိုရပ်တည် လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုတာ မြန်မာ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလုပ်ငန်း (MEPE) မှာ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖူးခဲ့လို့ တိတိကျကျ မပြောနိုင်ပေမယ့် အဲဒီ့အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ အဝေးကြီးမှာ ရှိမနေခဲ့တာရော၊ ကျောင်းမှာ သင်ခဲ့ရသမျှနဲ့ ကိုယ်တိုင် စပ်စပ် စပ်စပ် လေ့လာထားခဲ့တာလေးတွေပေါင်းပြီး ဒီစာစုကို ပြုစုဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ သုံးစွဲမှုကြားထဲက ကွာဟနေချက်
ဗ၀တ (ဖေါင်ကြီး) သင်တန်းတက်တုန်း မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းစာအုပ် (၁၉၉၀ မတိုင်မီကထုတ်ခဲ့တာ) ကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့မှာ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အံ့သြစရာ တွေ့ခဲ့ရတာက လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပျောက်ဆုံးမှု ပမာဏပါ။
ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ လျှပ်စစ်ပမာဏရဲ့ ၃၀% နီးပါး ပိုက်ဆံပြန်မရခဲ့ပါ။ ပျောက်ဆုံးသွား ပါတယ်တဲ့။ တစ်နည်းအားဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ယူနစ်တစ်သန်း ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးလိုက်တာ ဓါတ်အားခက ယူနစ် ၇ သိန်းဖိုးပဲ ပြန်ဝင်တယ်လို့ နားလည်ပေးပါ။ ကျန်တဲ့ယူနစ် ၃သိန်း ဘယ်ရောက်သွားပါသ လဲ……..? ?
အိပ်ကပ်တွေထဲကို ရောက်သွားတာ မဟုတ်နိုင်ကြောင်း လျှပ်စစ်သီအိုရီတွေနဲ့ လက်တွေ့ ကို ဆက်စပ်တင်ပြပါရစေ။
ကျနော် High Light လုပ်ချင်တာက Line Losses ပါ။ ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်တစ်ခုလုံးမှာ သွယ်တန်းထားတဲံ ၀ါယာကြိုးတွေရဲ့ အရေးပါပုံပါ ခင်ဗျ။
စက်မှုစွမ်းအင် (Mechanical Energy)၊ အပူစွမ်းအင် (Heat Energy) နဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် (Electrical Energy) အစရှိသဖြင့် လူသားအကျိုးပြု စွမ်းအင်တွေ အများကြီးရှိနေကြတဲံ အထဲ ဘာကြောင့်မို့လို့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ဟာ အသုံးအများဆုံး အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်လာရတာပါလဲ….?
အဖြေကတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်အသုံးချရတာ အလွယ်ကူဆုံးမို့ပါပဲ။ ၀ါယာကြိုးရှိရင် သယ်ယူပို့ဆောင် အသုံးချလို့ ရနိုင်လို့ပါ။
အဲဒီ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့နေရတဲ့ အဓိက အားနည်းချက်က သွယ်တန်းအသုံးပြုနေတဲ့ (Cable) ကြိုးတွေပါပဲ။ ကြိုးဆိုဒ်တွေဟာ ရှိသင့်တဲ့ ပမာဏထက် သေးနေပါပြီခင်ဗျ။
ပိုမြင်အောင် အရပ်စကားနဲ့ပဲ ရှင်းပါ့မယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ လမ်းထဲမှာ သွယ်တန်းထားတဲ့ ဓါတ်ကြိုးတွေကိုပဲ ကြည့်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကစပြီး ဓါတ်ကြိုးတွေ သွယ်တန်းထားခဲ့တယ်ဆိုပါစို့။
အဲဒီ့ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင် ဒီလမ်းထဲမှာ ရှိတဲံ အိမ်အရေအတွက်၊ လူဦးရေ၊ အသုံးပြုလျှပ်စစ် ပစ္စည်း တွေရဲ့ ပမာဏဟာ အဆများစွာ တိုးပွားလာခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ဓါတ်တိုင်ပေါ်က ဓါတ်ကြိုးကတော့ ဒီကြိုးပါပဲ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း သုံးစွဲမှု ပမာဏ များပြားလာတာနဲ့အမျှ အဲဒီ့ဓါတ်ကြိုးတွေထဲမှာ စီးဆင်းမယ့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်း (Current) ပမာဏတွေ ပိုများလာခဲ့ပါပြီ။
အဲဒီ့ (Current) ပမာဏ နဲ့ ဓါတ်ကြိုးရဲ့ လျှပ်စစ် ခုခံမှု (Resistance) မြှောက်ရင် ဓါတ်ကြိုးအတွင်း ဆုံးရှုံးသွားလျော့နည်းသွားမယ့် ဗို့အားရပါမယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မီးအားမပြည့်ဘူးဆိုတာရဲ့ အဓိကတရားခံတစ်ယောက်ပါ။
“ပွဲတိုးတဲ့ပုဆိုး မျိုးမျိုးလုံချည်” ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာလေးတွေ ခေတ်စားနေတဲ့ကာလ သဲတော၊ ၀မ်းတွင်းမှာ စက်ရက်ကန်းတွေ အပြိုင်းအရိုင်း နေ့ချင်းညချင်း တိုးချဲ့လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် အဲဒီ့ သဲတောဝမ်းတွင်းမှာ ဓါတ်တိုင်တစ်တိုင်နဲ့ တစ်တိုင်ကြား ဗို့အားကျဆင်းမှု ၁၀ ဗို့ ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီ့တော့ ရပ်ကွက် Transformer ကအထွက်မှာ ဗို့အား ၂၀၀ ရှိတယ်ဆိုရင် ဓါတ်တိုင် တစ်တိုင်ကွာသွားရင် ဗို့အား ၁၉၀၊ နောက်တစ်တိုင်ထပ်ကွာသွားရင် ဗို့အား ၁၈၀ နဲ့ Transformer နဲ့ ဓါတ်တိုင် ၁၀ တိုင်ကွာသွားရင် ဗို့အား ၁၀၀ ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ အဲဒါ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်ပါ။
အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းမှာ မီးအားမပြည့်လို့ မီးအားမြှင့်စက်တွေ တပ်ဆင်လာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းပါပဲ။ မီးအားမပြည့်ဘူး…. ဘာကြောင့်လဲ….. ?ဘယ်နေရာမှာလျော့သွားတာ လဲ…?
စီးဆင်းနေတဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မရှိတဲ့ (သေးငယ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့) ဓါတ်ကြိုးများကြောင့်ဆိုတာ အချက်တစ်ချက်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုတွေ မတိုးမြှင့်နိုင်သေးခင် လျော့နည်းပျောက်ဆုံးရခြင်း ယိုပေါက်တစ်ပေါက်ကို ပိတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အများကြီးအကျိုးရှိနိုင်မှာမို့ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းတွေကိုပါ တစ်လက်စတည်း တင်ပြပါရစေနော….
လျှပ်စစ်လောကမှာ အဓိက မင်းသားကြီးက လျှပ်စီးကြောင်း (Current) ခင်ဗျ၊ မည်သည့်လျှပ်စစ် ပစ္စည်းမဆို လျှပ်စီးကြောင်း (Current) မရှိရင်/မဖြစ်ရင် အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ မီးလင်းအောင် ခလုပ်လေးနှိပ်လိုက်တာဟာ လျှပ်စစ်စီး ပတ်လမ်း ပြည့်သွားစေပြီး လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းသွားနိုင်ဖို့ပါ။ လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတလေးအတွက် အခြေခံ ရရှိအောင် နဲနဲလေးထပ်မံရှင်းပြခွင့်ပေးပါဦးနော်။… လိုတိုရှင်းပဲ အရပ်သား သာမာန်လူတွေ နားလည်အောင် ရေးပါ့မယ်။
အိမ်တစ်အိမ်မှာသုံးထားတဲ့ (ခလုပ်ဖွင့် အလုပ်လုပ်နေတဲ့) လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အားလုံးပေါင်း အသုံးပြု ပါဝါ ၀ပ် ၂၀၀၀ ဆိုကြပါစို့…. ဗို့အား ၂၀၀ မှာသုံးရင် လျှပ်စီးကြောင်း ၁၀ အပ်ပီယာ စီးပါ့မယ် ဓါတ်တိုင်ကနေ အဲဒီ့ အိမ်အထိ ကြားထဲမျာသုံးထားတဲ့ ၀ါယာကြိုးရဲ့ ခုခံမှု (resistance) သည် ၁ အိုမ်း (1 Ώ) ရှိနေမယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ဝါယာကြိုး (တိုင်မှ အိမ်) ကြားထဲမှ လျော့နည်းသွားတဲ့ ဗို့အားသည် ၁၀ ဗို့ဖြစ်ပါမယ်။ (မြင်သာအောင် ဥပမာပေးတာပါခင်ဗျ)
နိုင်ငံတကာမှာ (မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င်) ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လိုင်းကြိုးအတွင်း ဗို့အားလျော့နည်းမှု အများဆုံးသတ်မှတ်ချက်သည် ၂% + ၁ ဗို့ဖြစ်ပါတယ်။ MEPE ပေးပို့ဓါတ်အား (၂၀၀ ဗို့)နဲ့တွက်ရင် (2% of 200 V =4V) + 1 V =5Volt maximum ဖြစ်ရပါမယ်။ ဓါတ်တိုင်ကနေ အိမ်တွေကို သွယ်တန်းထားတဲ့ ၀ါယာကြိုးရဲ့ ပမာဏတွက်ချက်မှုမှာ အဓိက သုံးရတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပါ။ ဓါတ်တိုင်ပေါ်မှာ (၂၀၀ ဗို့) ရှိနေရင် အိမ်က လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးသုံးနေချိန်မှာ (FULL LOAD CONDITION) အိမ်ကမီတာ Box ကို ရောက်နေရမယ့် ဗို့အားသည် (၂၀၀ – ၅) = ၁၉၅ V ထက်လျော့မနေစေရပါဘူး။ လျော့နေရင် ( ဓါတ်တိုင်ပေါ်မှာ ၂၀၀ဗို့၊ အိမ်က ပစ္စည်းတွေ အားလုံးသုံးထားချိန် မီတာ Box မှာ ၁၉၀ ဗို့ပဲ ရှိတယ်ဆိုရင် ) တိုင်နဲ့ အိမ်ကြား ၀ါယာကြိုးထဲမှာ ၁၀ ဗို့ပျောက်တဲ့သင်္ကေတပါ။ ၀ါယာကြိုး ဆိုဒ်သေးနေခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ၀ါယာကြိုး အလျားအရမ်းရှည်နေခြင်း ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါတော့တယ်။ ပိုပြီး တုတ် (ဆိုဒ်ကြီး) တဲ့ ၀ါယာကြိုးကို ပြောင်းပြီး သုံးသင့်နေပါပြီး။ ၀ါယာကြိုးတွေရဲ့ လျှပ်စစ်ခုခံမှု (Resistance) ဟာ ၀ါယာကြိုးရဲ့ လုံးပတ်ဆိုဒ် (Diameter) နဲ့ပြောင်းပြန်အချိုးကျပါတယ်။ ၀ါယာကြိုး ပိုကြီးလေ (တုတ်လေ) ခုခံအားနည်းလေဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါယာကြိုးပိုသေးလေ ခုခံမှုပိုများလေဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးအတွင်း ဆုံးရှုံးမှုများလေ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ါယာကြိုးတွေရဲ့ လျှပ်စစ်ခုခံမှု (Resistance) ဟာ ၀ါယာကြိုးအလျား (Length) နဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။ ၀ါယာကြိုး ပိုရှည်လေ ခုခံအားများလေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေအရ ဓါတ်တိုင်နဲ့ အိမ်အကြား အများဆုံး အကွာအဝေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ကြိုးတစ်ခွေ (ကိုက်၁၀၀) ဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်တိုင်မရိုက်နိုင်တဲ့နေရာတွေများလို့ အိမ်နဲ့ ဓါတ်တိုင်အကြား ကြိုး ၂ခွေ/၃ခွေ ဆက်ပြီး သွယ်တန်းထားတာတွေ ရှိနေဆဲပါ။ အဲလိုဆိုရင် အိမ်ကို ဗို့အားအပြည့်ရောက်နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကြိုးဆိုဒ်ပိုကြီးပြီး သုံးမယ်ဆိုရင် နည်းနည်း သက်သာနိုင်ပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ် များမှာကိုကြောက်ပြီး မီးရရင်၊ မီးရောက်ရင် ပြီးရောဆက်သွယ်ထားကြလို့ ခရမ်းချဉ်သီး မီးသီးတွေ ဖြစ်ကုန်ရတာပါခင်ဗျ။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှုမှာ ပြသနာ အရင်းခံနောက်တစ်ခုကတော့ ၀ါယာကြိုးတွေရဲ့ အရည်အသွေး နိမ့်ကျမှု ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ကို သယ်ဆောင်ရာ၊ ဖြန့်ဖြူးရာမှာ သုံးသင့်တဲ့ ၀ါယာကြိုးသည် ကြေးနီ (Copper) Wire ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှုကို အနှေုာင့်အယှက်ပေးတဲ့ ခုခံမှု (Resistance) နည်းလို့ အသုံးများရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (Copper) ထက်ခုခံမှု (Resistance) နည်းတာ ရွှေ (Gold) နဲ့ ငွေ (Silver) ပဲရှိပါတော့တယ်။ တန်ဖိုးကြီးလွန်းတာရော၊ ခိုင်ခံ့မှုအားနည်း တာရောမို့ ကြေးနီ (Copper) ကိုသာအများဆုံး အသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်အမြင့်ကြီးတွေနဲ့ တင်ပြီး နေရာအဝေးကြီးဆွဲထားရတဲ့ ဗို့အားမြင့် မဟာဓါတ်အားလိုင်းတွေမှာတော့ အလေးချိန်ပေါ့ပါးစေဖို့ လိုအပ်တာမို့ ခုခံအားပိုများပေမယ့် ကြေးနီ (Copper) ထက်ပိုပေါ့တဲ့ Aluminum ကိုသုံးရပါတယ်။ခိုင်ခံမှုအားနည်းတာကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ အလယ်အူတိုင်မှာ Steel Wire ထည့်ထားတဲ့ High Tension Cable တွေကိုသုံးပါတယ်ခင်ဗျ။
“ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲလိုချင်တယ်” ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ရပ် လွှမ်းမိုးထားချိန် မီးရောက်ရင်ပြီးရော ဗို့အားဘယ်လောက်ရောက်ရောက်၊ ကြိုးထဲမှာ ဘယ်လောက်ပျောက်ပျောက် ထည့်မစဉ်းစားခဲ့တဲ့ (စဉ်းစားခွင့်မပေးခဲ့တဲ့) ကာလတစ်လျှောက်မှာ ခုနက ဗို့အားမြင့် မဟာဓါတ်အားလိုင်းတွေအတွက် တင်သွင်းထားခဲ့တဲံ H.T Cable က ဒန်ကြိုးမြှင်တွေကို ဖြည်ထုတ်၊ သုံးလွန်းတင်ကြိုးပြန်ကျစ်ပြီး ခါတော်မှီဆွဲလိုက်ကြတဲ့ Aluminum ၀ါယာသုံး 11 KV ဓါတ်အားလိုင်းတွေနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲ 220/440 V ဓါတ်အားလိုင်း တွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြ တော့တာပါဘဲ။
အဲဒီ့အမှားတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေကို လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ ခင်ဗျ။
ဒန် (Aluminum) ဖြစ်လို့ ခုခံမှုများပါတယ်။ အဲဒီ့ကြိုးတွေကြောင့် လိုင်းထဲမှာ ဗို့အားကျဆင်းမှု ပိုများပါတယ်။
MEPE ဓါတ်အားခွဲရုံကနေ ရပ်ကွက် ထရန်စဖော်မာ ကိုပို့ပေးတဲ့ နေရာမှာတင် 11 KV အပြည့်မရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ရပ်ကွက် ထရန်စဖော်မာအ၀င်မှာ 11 KV မပြည့်တော့ပဲ 10 KV ပဲရောက်တယ်ဆိုရင် 220/440 ဗို့ဖြစ်နေရမယ့် ထရန်စဖော်မာအထွက်မှာ 200/400 ဗို့ပဲ ထွက်ပါ တော့မယ်။
အဲဒီ့လျော့နည်း ထွက်ရှိလာတဲ့ ၂၀၀ ဗို့အားကို ရပ်ကွက်ထဲဖြန့်တဲ့ ဓါတ်တိုင်ပေါ်မှာ Aluminum ၀ါယာကြိုးနဲ့ ထပ်ပြီးအသုံးပြု သွယ်တန်းလိုက်တဲ့အခါ နောက်ထပ်ပြသနာ ၂ မျိုး ထပ်ကြုံရပြန်ရော…..
ပထမ တစ်မျိုးက ပြောထားခဲ့ပြီးသား လိုင်းထဲမှာ ခုခံမှုများလို့ လိုင်းအတွင်းဆုံးရှုံးမှု (Line Losses) များတာ။
ဒုတိယ တစ်မျိုးက ဓါတ်တိုင်ပေါ်က ဓါတ်ကြိုးက Aluminum၊ အိမ်ကိုသွယ်မယ့် ၀ါယာကြိုးက Copper အဲဒီ့ ၂ ခုကို ချိတ် ယုံကလေး ချိတ်ပြီး မီးဆွဲရတော့ မတူတဲ့သတ္ထု ၂ ခုကြား လျှပ်ကူးမှု မကောင်းဖြစ်ပြီး ဆုံးရှုံးမှု ထပ်ဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စ၊ ညဘက်ဆို မီးပွား (Spark) တွေ တဖွားဖွားမြင်နေရတဲ့ အထိပေါ့။
ကျနော်ကျောင်းတက် ခဲ့တဲ့ မုံရွာ GTI တည်ရာ မြို့သစ်ရပ်ကွက် အိုးဘိုတောင်၊ အောင်ချမ်းသာရပ်က ဓါတ်တိုင်တွေကြည့်လိုက်ရင် အုတ်ခဲထက်ပိုင်းကြိုးတွေ ချိတ်ဆွဲပြီး ထိတွေ့မှု ကောင်းအောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင် လက်ရာတွေ တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။
တချို့ရပ်ကွက်တွေကတော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် သဲအိတ်လေးတွေ ချုပ်ပြီး အိမ်ကိုဆွဲမယ့် ၀ါယာတွေမှာ Weight ထည့်ပေးထားတာတွေ့မြင်မှတ်သားခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လျှပ်စစ်ပြသနာအတွက် လိုင်းကြိုးအတွင်း လေလွင့် ပျောာက်ဆုံးနေမှုဆိုင်ရာ အချက်လေးတစ်ချက်ကို နည်းနည်း လေး အသိပေး လိုက်တာပါခင်ဗျာ။
Post လည်း တော်တော်ရှည်သွားပါပြီ။
Technical Data Detail လုံးဝထည့်မထားပဲ ဒီနေရာမှာ ဒီလိုယိုပေါက်ကြီး ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာကိုပဲ တင်ပြလိုက်တာပါ။ ၀ိုင်းဝန်းသြဘာပေးကြပါကုန်လော့။
( Line losses updated data from 24/7 News Journal ( Dated- 6.5.2012 )=For Yangon, total losses are down from 18% to 7%. Most of the losses were due to stolen units. Official said. )
( ခေတ်လား စနစ်လား လူလား မူလား ) ဆိုတာကတော့ ဆြာ့ဆြာကြီးတွေပြောဆိုကြလိမ့်မပေါ့
ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. မြန်မာပြည်ထဲအင်တာတွေနက်မယ်လုပ်တုံးက.သွားလုပ်နေတဲ့အသိတယောက်ပြောပြတဲ့.. ပြသနာတခုသတိရမိတယ်..
အဲဒါ.. ဖုန်းကြိုးကိုလွှတ်လိုက်တဲ့ဒေတာတွေ.. လမ်းကနှုတ်တွေမှာ.. ကျကျပြီးဒေတာတွေဆုံးကုန်တယ်တဲ့ဗျ..
အပြစ်ရှာတော့.. သိတော်မူတဲ့အတိုင်း.. မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နဲ့.. ဖုန်းကြိုးတွေကို.. ပြတ်နေတာတွေ.. လိမ်ပြီးချည်.. ချိပ်ပြီးချည်နဲ့.. အစုတ်ပလုပ်ဝါယာတွေနဲ့…တွေ့တော့တာပဲ..။
..အားလုံးအဖြေက.. မြန်မာပြည်မှာ အင်ဖရာစရပ်ချာ မရှိသေးပါလို့ပါပဲ..
အင်ဖရာစရပ်ချာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ပဲ.. ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ ပြသနာအကြီးအကျယ်တက်နေတဲ့.. သတင်းဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်..
ပြည်နယ်ကို..အကြွေးနွံအနစ်ခံပြီး.. အင်ဖရာမှာရင်းနှီးမြုတ်နှံဖို့လုပ်နေတဲ့ သတင်းပါ..။
Brown Administration to push through Peripheral Canal say Delta …
Central Valley Business Times –7hours ago
Jerry Brown has decided to push throughaplan to buildaperipheral canal … “Further, the major proponents of this infrastructure are corporate …
BusinessWeek –6days ago
California Governor Jerry Brown is seekinga38000 percent … revised this week, includes $6.1 billion in infrastructure costs for the first 130 …
Brown Backs Bullet Train While Cutting Cash to Welfare Moms‎ San Francisco Chronicle
DOT to California: Use It or lose It‎ Politico
Emily Goff: State can’t afford ‘free’ rail money
OCRegister – 22 hours ago
Jerry Brown has been hard-pressed to come up withaprescription to … pressing infrastructure needs but limited resources to pay for them.
ဒီလိုပဲ အတော်များများက ပြီးစလွယ် လုပ်ခဲ့ကြတာများပါတယ်..
ပြီးစလွယ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကတော့ ရေလျှံတာ၊မီးအားမပြည့်တာ၊မြောင်းပိတ်တာ အဲသလိုတွေပေါ့နော်..
အစကောင်းဖို့ လဲ လိုသေးသကိုးဗျ.
ဒီအချိန် ဒီလိုထောက်ပြတာ မီးလူကြီးနဲ့မီးပြည်သူကြား မီးအားမပြည့်တဲ့အကြောင်းလေး နားလည်မှုရှိသွားကြမယ်ထင်ပါရဲ့ဗျ
ဒါက ဓါတ်အားလေလွင့် မှုရဲ့ အဓိက ဇစ်မြစ်ပါ။ နိုင်ငံတော်က ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ပေးမှ ရမယ့် အချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဓါတ်အားတွေ ဆုံးရှုံး နစ်နာ ရတာကတော့ ဒီလေလွင့်မှု တခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ လျှပ်စစ်ဌာနနဲ့ပူးပေါင်း ပြီး ဓါတ်အား ခိုးတဲ့ ပြည်သူ တချို့ တို့ ကြာင့် ပါပဲ။ တချို့ စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဟာ အမှန်တကယ် ကျသင့် တဲ့ မီတာခ ကို မပေးဆောင်ပဲ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် လျှပ်စစ်နဲ့ ပူးပေါင်း ပြီး ဂွင်ရိုက် ကြပါတယ်။ မီး အသုံးများတဲ့သူဌေးအိမ်တချို့ က အနိမ့် ဆုံး အဆင့် မီတာ ဖတ်စာရေး၊ လိုင်းမန်း စသူတို့နဲ့ညှိပြီး အကြံဖန် လုပ်ကြတယ်။ ရပ်ကွက် တွေထဲက တချို့အိမ်တွေက လိုင်းမန်း ကို လိုင်းကြေးပေးပြီး မီတာ မတပ် ပဲဓါတ်တိုင်က တိုက်ရိုက် သွယ် ကြတယ်။ မြိုနယ် လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ကနေ လိုင်းမန်း၊ မီတာ စာေ၇း အထိ တရုံးလုံးတွက် ဂွင် ကအဲလိုရတာပါ။မြို့ ယာ တွေ ခေတ်ကောင်းတုံးက ဆို တော် တော် ချမ်းသာကြပါတယ်။ ခုတော့ မြို့ ယာ ရဲ့ အထက်မှာ တပ်ကလာတဲ့ ဗိုလ် ပြုတ်တွေရောက်နေ ပါပြီ ။ အားလုံးဝိုင်းစားပေါ့။ ကျမ ဘာလို့ သိလဲဆိုရင် အီးပီစီနဲ့ ပတ်သက်ဖူးလို့ ပါပဲ။
တကယ်တော့ ဒါတွေဟာလူတစု ကောင်းစားပြီး နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူ တွေရဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုပါပဲ။
လက်မထောင်ခဲ့ပါတယ် ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ ..
ကြုံလို့ ၀ါယာရှော့ ဖြစ် မီးလောင်တာတွေဟာလည်း ၀ါယာကြိုးဆိုဒ်မီအောင် မသုံး ၊ မသုံးနိုင် ၊ ဂရုမစိုက် ၊ ခုလည်း ရတာဘဲကွ ဆိုတာကနေ မြစ်ဖျားခံလာခဲ့တယ် ဆိုတာရယ် ၊ ခံရမယ့် ဖြူးစ်တွေမှာ အမ်ပီယာ အတိအကျမဟုတ် ဘဲ ကြုံတဲ့ ၀ါယာကြိုးနဲ့ ခံ ထားတာတွေ ၊ ခံတောင် မခံတော့တာတွေ ၊ Breaker တွေ အလုပ်မလုပ် ပြုတ်မကျ တာ ၊ လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းကောင်း မသုံးနိုင်တာ ၊ Earth Leakage Breaker ဆိုတာတွေ မထည့်နိုင်၊ ရှိမှန်းတောင် မသိနိုင်တာတွေ နဲ့ မီးလောင်တော့မှ ဒင်းတို့လျှပ်စစ်ကြောင့် ပါဆိုပြီး လက်ညိုးတထိုးထိုးလုပ်ကြတာတွေ အတွက် ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပေမဲ့ မရေးဖြစ်တာ အခု ကိုစွယ်တော်ရွက် ပို့စ်မှာဘဲ နဲနဲ ၀င်ပွားသွားပါတယ်။
by the way, ကိုယ်တိုင်ရိုက်တာလား သားတော်မောင်ကိုဘဲရိုက်ခိုင်းတုန်းဘဲလား … :grin:
Technically အရပြောသွားတာကောင်းပါတယ် ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ…ဒါပေမယ့် Systematically ဖြစ်ဖို့ကတော့တော်တော်အချိန်ယူလုပ်ယူရအုံးမယ်။
ဒီလိုလျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုknowledge sharing လုပ်ပေးလို့
အချက်အလက်တိတိကျကျနဲ့ ကိုရှင်းပြထားတဲ့ ပို့ စ်မို့ 
ဖတ်ရတာ အဖိုးတန်ပို့ စ်တစ်ခုဝင်ပေါ့။ကျေးဇူးတင်ပါ
ယိုပေါက်တွေလဲရှိနေပြန် ..ပြီးတော့ အရမ်းကြာနေပြီးဖြစ်တဲ့..ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတဲ့
ယခင်က သွယ်တန်းထားတဲ့ ကြိုးတွေလဲ ဖြစ်နေပြန်ဆိုတော့ မလွယ်သေးဘူး ထင်ပါရဲ့…။
ကြေးနီနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၊ မန်းတလေးမြို့၃၅လမ်း ၆၃လမ်း ခန့် မှာ ကြေးနီသတ္တုတွင်း ဆိုင်ရာ ရုံး ရှိပါတယ် ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ခန့် အထိ ၊ မုံရွာ ကြေးနီထွက်ရာ ဒေသတွေကို အစိုးရကဘဲ ကိုင်တွယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်ကုမ်ပဏီ နဲ့ အကျိုးတူ လုပ်တယ် ဆိုပြီး ဖြစ်လာပါတယ် ။ ( ခုနှစ် မှားလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ ) ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံထဲကို တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝါယာကြိုးအညံ့စားတွေ သွင်းလာပါတော့တယ် ။ တခြားမြို့ တွေတော့ မသိဘူး ။ မန်းတလေးမြို့ က အချို့ အိမ်အသစ်ဆောက်တဲ့ လူတွေဟာ ၊ မီးဆင်တော့မယ်ဆိုရင် ၊ ဝါယာကြိုးအဟောင်းရောင်းချသူများထံမှ ၊ ရှေးတုန်းက အန်းတိတ် ဝါယာကြိုး ( အထဲက ကြေးသားပိုတုတ် ၊ ပိုကောင်း ) များကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုလျှက် ရှိပါသေးတယ် ။
ကိုစွယ်တော်ရွက် ပြောသလို ဓာတ်အား ဆုံးရှုံးမှုအကြောင်း လေးကို ကြားဖူးပါတယ်။ ခုလိုပြောပြတဲ့သူရှိတော့လည်း ပိုပြီး နားလည်ရပါတယ်။
ကျမတို့ ဆီမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထဲက ဓာတ်ကြိုး အသစ်တွေသွယ် တိုင်တွေ ဆိုက် လိုင်းသစ်တွေ ကြိုးသစ်တွေ ဆွဲနဲ့ပါ။ မပေးလို့သာ မပေးတာ အဲ့ဒီလို အကြီးစား ပြင်ဆင်မှုတွေတော့ လုပ်ပြီးနေပါပြီ။ သူတို့မှာလည်း အစီအစဉ်ရှိပုံ ရပါတယ်။
ဗဟုသုတ အများကြီးရတဲ့ Post လေးပါ.. နီးစပ်ရာ တွေ့သမျှ လူတွေကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါဦးမယ်။
လျှပ်စစ်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးကို အံဝင်ဂွင်ကျ
ကြုံလို့ ၀ါယာရှော့ ဖြစ် မီးလောင်တာတွေဟာလည်း ၀ါယာကြိုးဆိုဒ်မီအောင် မသုံး ၊ မသုံးနိုင် ၊ ဂရုမစိုက် ၊ ခုလည်း ရတာဘဲကွ ဆိုတာကနေ မြစ်ဖျားခံလာခဲ့တယ် ဆိုတာရယ် ၊ ခံရမယ့် ဖြူးစ်တွေမှာ အမ်ပီယာ အတိအကျမဟုတ် ဘဲ ကြုံတဲ့ ၀ါယာကြိုးနဲ့ ခံ ထားတာတွေ ၊ ခံတောင် မခံတော့တာတွေ ၊ Breaker တွေ အလုပ်မလုပ် ပြုတ်မကျ တာ ၊ လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းကောင်း မသုံးနိုင်တာ ၊ Earth Leakage Breaker ဆိုတာတွေ မထည့်နိုင်၊ ရှိမှန်းတောင် မသိနိုင်တာတွေ နဲ့ မီးလောင်တော့မှ ဒင်းတို့လျှပ်စစ်ကြောင့် ပါဆိုပြီး လက်ညိုးတထိုးထိုးလုပ်ကြတာတွေ..
ကိုစွယ်တော်ရွက်လို လူမျိုး ပြည်တော်ပြန်လာတာ
Now I arrive back to Yangon.
Please let me meet our MG villagers as much as we can.
Please share my loving kindness to all of you and your families.
Yes, Sure, I will try my best to post about Electricity of Myanmar.
( Yangon, Myanmar ).